Monday July 09, 2018 - 10:36:43 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya Tuunis ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan 9 askari oo katirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ay dhinteen kadib markii qarax lala helay laba gaari oo nuuca dagaalka ah kadibna waxaa xigay weerar toos ah oo ay xoogag jihaadi ah ku qaadeen ciidamadii ka badbaaday qaraxa.
Sufyaan Alzacaq oo ah Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Tuunis ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku xaqiijiyay in weerar dhiigbadan ku daatay lagu beegsaday ciidamada ilaalada uxuduudaha.
Wuxuu sheegay in weerarka oo ka dhacay deegaanka Ceynul Suldaan uu yimid xilli ciidamadu howlgal roondeyn ah ka wadeen xuduud beenaadka ay wadaagaan Tuunis iyo Aljazaa'ir.
Dhinaca kale Ururka Alqaacidda ee Maqribul islaami ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan, bayaan kasoo baxay mu'asasada Al-andalus oo ah garabka warbaahineed ee alqaacidada Waqooyiga Afrika ayaa lagu sheegay in 9 askari lagu dilay weerarka oo ay fulisay Katiibada Cuqba Bin Naafic.
Alqaacidda waxay sheegtay in xoogageedu ay gacanta ku dhigeen saanado hub ah oo ay wateen ciidamada dowladda Tunisia ee weerarka lala eegtay, waa weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa ee ka dhaca Tuunis tan iyo sanaddii 2016 xilligaas oo xoogag hubeysan isku dayeen in ay qabsadaan magaalada Maqdaraad ee dhacda Koonfur Bari wadanka.
Dalka Tunisia ayaa ku jira xaalad degdeg ah lagasoo bilaabo sanaddii 2015 xilligaas oo weerar 40 qof reer galbeed ah ku dhinteen lagu qaaday magaalada loo dalxiis tago ee Soosah.